China Flat Head Full Hexagonal Body Rivet Nut intshayelelo umzi-mveliso kunye nabavelisi |Yuke
I-Flat-head, i-full-hex rivet nuts inika imisonto eyomeleleyo enomdla, njengebhokisi okanye amacandelo e-tubular, kumaphepha amancinci kunye nakwizicelo ezichukumisa kuphela icala lephaneli.Ifumaneka ngentsimbi kunye nentsimbi engenasici.
Ziyakwazi ukunyuswa kwiipaneli zibe zincinci njenge-0.5mm kwaye azikhawulwanga ngobunzima obuninzi be-self-locking nut, ngoko ke zifanelekile ukufakwa kwiipaneli ezinzima okanye ezingenayo i-ductile.
Izinto: Intsimbi yeCarbon
UkuQeda komphezulu: Zinc iPlated
Intloko: Intloko ecaba
Umphezulu Womzimba: Hex Shank
Isicelo: Irivethi yeTubula enemisonto.Isetyenziswa kwiintlobo zezinto zokufunxa njengeplastiki, iintsimbi zentsimbi.
Isakhono seMveliso: IiToni ezingama-200/ngenyanga
Isampulu: Isampulu yasimahla
I-rivet nuts zineenzuzo ngaphezu kwezinye iziqhoboshi ezisisigxina ngenxa yokuba zinokufakelwa ebaleni okanye zisetyenziselwe umsebenzi wokulungisa ukuze zitshintshe izibophelelo ezifakwe ngaphambili.I-advanteji yokufaka ukusuka kwelinye icala lesicelo kuthetha ukuba awusoze ufune ukufikelela ngasemva kwendawo yolawulo.
Izixhobo ezikhethekileyo ziyafuneka ekufakeni - izixhobo zivela kwizixhobo zezandla eziphantsi kakhulu kwiibhetshi ezincinci ukuya kwi-pneumatic automatic mounting guns kwizicelo zevolumu ephezulu.
Ixesha lokukhokhela : 10 ~ 15 Usuku lokusebenza, iintsuku ezi-5 kwisitokhwe
2. Ibhokisi yombala omncinci: ibhokisi yombala, ibhokisi yefestile, i-polybag, i-blister.Ukupakisha kabini iqokobhe okanye njengemfuno yabathengi.
Ngaphambili: Rivet Nut Countersunk Knurled Open End inkcazelo
Okulandelayo: I-CSK encinci i-Open End Rivet Nut
DIN7337 uhlobo oluvulekileyo olungqukuva intloko eyimfama rivet
Umsonto ufaka iRivet Nuts
Insimbi engenasici ivaliwe isiphelo rivets
Insimbi engenasici ivula idome intloko eyimfama yePOP rivet
Wide Flange Aluminiyam Pop Rivets